Tele RELAY တစ်ခု - 50 နှစ်များတွင်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ဖို့လိုသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "50 နှစ်များတွင်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ဖို့လိုသည်
၏မိသားစု ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်အဲလက်စ် Rodriguez တိုးချဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ပါကလက်ထပ်နှစ်ခုအနာဂတ်၏ဆန္ဒဖြစ်ပါသည်။ ယခုပင်လျှင်နှစ်ခုဟောင်းကိုအမေရိကန်ဘောလုံးကစားသမားများအဖေမှအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ထုတ်ဖော်ပြသ SiriusXM အဆိုတော်ကိုတဖန်မိခင်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒခဲ့တာ။ အဲလက်စ် Rodriguez ကိုပြောသည် Hoda Kotb Que ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် 52 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သူ, သူမ၏အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။
"ငါသည်သင်ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်တွေ့မြင်နဲ့ကျွန်မသူသည်သင်၏ဥပမာအတိုင်းလိုက်နာချင်ပေလိမ့်မည်ထင်, သူကရှင်းပြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းအကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုအနည်းငယ်ပညာရေး, အနည်းငယ်အကူအညီနဲ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ "ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် ပြီးသားအမွှာ 11 နှစ် mom, ဖြစ်ပါတယ် Maximilian နှင့် Emmeနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမွေးဖွားခဲ့ပြီး မာ့ခ်အန်သိုနီ။ ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, အဲလက်စ် Rodriguez သမီးနှစ်ယောက်၏ဖခင်ဖြစ်ပါသည်, အဲလာ (11 နှစ်) Natasha (14 နှစ်) ။ သူတို့အသစ်သောမိဘများဖြစ်လာ၏အိပ်မက်မက်လျှင်, သူတို့သည်ယခုအချိန်တွင်ဘို့မိမိတို့စီစဉ်အလုပ်များနေကြသည် အနာဂတ်မင်္ဂလာဆောင်။ သူတို့သားသမီးအပြင်အခမ်းအနားတစ်ကဏ္ဍမှပါ။
"သူတို့ကအမြဲသားသမီးလေးယောက်နှင့်အတူသူတို့မိသားစုအကြောင်းပြောဆို။ သူတို့တစ်တွေမိသားစုအဖြစ်အတူတူလာနိုင်ခဲ့ဘူးလျှင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီသို့ဦးတည်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ကနဦးဆွဲဆောင်မှုလျင်မြန်စွာမှိန်လိမ့်မယ်, အနီးကပ်မှကရှင်းပြခဲ့သည် လူပုဂၢဳိလ္မ်ား. ဒါဟာမိသားစုများပေါင်းစည်းဖို့အမြဲလှည်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ဂျနီဖာနှင့်အဲလက်စ်က start ကနေအကြီးအအလုပ်တစ်ခုကိုပြု၏။ ကလေးများအတူတကွကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကဂျနီဖာနှင့်အဲလက်စ်အချိန်ကြာမြင့်စွာလက်ထပ်ခဲ့ချင်တယ်။ " ဒါဟာစတုတ္ထလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွစျလိမျ့မညျ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ဘယ်ပြီးသားနှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်နေသည် မာ့ခ်အန်သိုနီ, Cris Judd နှင့် Ojani Noa.
ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်သူမ၏အဖော်များနှင့်ရည်းစားအဲလက်စ် Rodriguez - အနီရောင်ကော်ဇောရုပ်ရှင်သည့်အခါ "Hustlers"
ထောင်ထဲမှာ Felicity Huffman မိမိထိန်းသိမ်းရေး၏အခြေအနေများရှာဖွေတွေ့ရှိ